Kukhona isilinganiso amadolobha Russian ngezizathu ezifana ukuhlinzekwa amaphuzu ezahlukene iIgama, kukhona isilinganiso esinjalo, futhi cishe ikhofi. Ekaterinburg ke lifaka yesithathu ngemva eMoscow Petersburg. Enhloko-dolobha ye-Urals ikhofi izindlu ngempela okuningi - ezingaphezu kuka-150, futhi njalo ekuvuleni umbhali omusha, izindawo isihloko noma inethiwekhi. Sikhetha eziphezulu ezingu-10 phakathi zezitini nodaka, kumane nje ikhofi enjalo ezithakazelisayo encane ungakwazi ukuncintisana ezingeni wenduduzo nokuthula kwengqondo enikeza inkomishi elimnandi ikhofi asanda ukwenziwa.
Lokhu esitolo ikhofi ihlukile professional approach kanye okusuka imenyu. Ngakho, barista kumele ukupheka okungenani 150 amalitha ikhofi, kuphela khona-ke uyokwazi ukusebenza for the ikhofi izivakashi. By the way, ikhofi ukwenziwa kusukela ubhontshisi engcono inkomishi elimnandi we iziphuzo umhlabeleli ukunikela waffles, granola futhi croissants okuzenzela. Ekuseni, okuthosiwe amaqanda, ngisho sha Iqanda emzaneni.
Izibuyekezo uqaphele high ikhofi wakhonza lapha, okuyinto omqoka iyiphi ikhofi, kodwa phawula kanye nokuntuleka ezingeni elifanele ukuqeqeshwa kwabasebenzi benomusa.
Le ndawo Positioning ngokwaso njengoba esitolo ikhofi, noma ngaphezulu ngokuqondile, ngisho workshop ezimbili ezingxenyeni ezihlukahlukene zedolobha. It is eholwa abathanda abasha - guys funny futhi enobungane abondliwako zekhofi engavamile nge kumasayiraphu ezingavamile noma izithasiselo ezifana amantongomane pine noma halva. Izibuyekezo Nokho phawula isimo esinokuthula sakuleli kakhulu futhi benobungane futhi ikhofi okuhle, futhi akhononde ngokuntuleka isikhala umoya ohlanzekile endlini. Nakuba lokhu akuyona cafe ngomqondo ogcwele wegama, kodwa kunalokho isitolo, esebenza ikhofi ukuya, abantu abaningi bafuna ukuba sihlale phansi futhi abelane amagama ambalwa nabangani noma barista enobungane.
Lokhu esitolo ikhofi usebenza yezitolo "Greenwich" futhi has amakamelo ethokomele kwesokudla ku amathathu phansi. Njengoba lesi sibonakaliso, akusiyo nje esitolo ikhofi, futhi Vienna, Nokho, ukuthi unesibopho ubulungu e Vienna, kunzima ukuqonda ngesikhathi esisodwa. Nokho, ukubuyekezwa ambonise ikhofi okumnandi futhi kwakha isimo esihle kakhulu. Kodwa kukhona downsides - ikakhulukazi-ithrekhi eyodwa noma abasebenzi hhayi esinenhlonipho kakhulu. Edolobheni kunzima ukuthola esitolo ikhofi ubusuku nemini. Ekaterinburg has a ingqikithi 4 kwalezi zikhungo, futhi ezintathu kuzo inethiwekhi, ngaphandle kwabo Coffeeshop kuphela Inkampani bangase bakunikeze ukuphuza hot ikhofi elimnandi nganoma isiphi isikhathi sosuku.
Akukona nje esitolo ikhofi, kodwa esitolo, futhi wonke Academy of uthuthuva ikhofi ekhaya. Kube njalo ukutshela zingaki izinsuku ezisele ngaphambi supply ikhofi fresh, futhi kwenziwa kabili ngesonto. Labo abafisa ukunikeza amasampuli amahhala futhi akutshele ngokuningiliziwe indlela yokwenza ikhofi ekhaya. Futhi kulabo abafuna nje inkomishi isiphuzo enongiwe siyonikwa ngaphezu lattes evamile, i-espresso kanye cappuccino, ngisho entsha ezindlebeni ongaqeqeshiwe Rafa, Ezivamile futhi doppio. Futhi ngaphezu - amasaladi, izitsha hot, amasobho, sasekuseni kanye nama-dessert, kanye kwasemini ibhizinisi.
Abanikazi kuthiwa Positioning lokhu njengendlela cafe kweqiniso waseParis labangela ukuqala komkhakha. Lo mbono usekelwa wezangaphakathi nge SOFAS ezijulile ukhululekile, uphahla design kanye ubuciko lezinto ezindongeni. Sitolo lesitsengisa likofii ise ehhotela "Ekaterinburg-Central" isakhiwo, ngakho-ke iyathandwa hhayi bendawo kuphela, kodwa futhi phakathi izivakashi.
Coffee liyaziwa kophudingi yayo, kanye nokubuyekeza bethi ekhumbulekayo ngempela, kodwa nezinye izitsha phezu imenyu musa abangele njengoba raptures.
Lokhu esitolo ikhofi unyaka ngamunye uwela ohlwini izinguqulo best of portal ezine ezilinganayo. Namuhla-ke inethiwekhi elincane ezitolo ezintathu ezingxenyeni ezahlukene kuleli dolobha futhi abaningi bendawo, akazange anqikaze ukusho ukuthi lokhu iyona engcono kunazo ikhofi endlini e eYekaterinburg. Lapha ukwenziwa ikhofi zonke izindlela eyaziwa futhi wakhonza cocoa, ehla kanye salads ngaphezu kwako. Ekuseni kuba ibhulakufesi ezishibhile kakhulu, futhi iziphuzo ethengiwe isaphulelo.
Ukuze ikhofi omuhle kakhulu futhi ujabulele ikhofi izakhamizi eYekaterinburg. Entsha luhlobo ivulekile eduze Opera House, bayathanda ukuya izinsuku, imihlangano ibhizinisi kanye nje ukujabulela emkhathini.
Lo muzi ubizwa njalo avulekayo entsha coffee shop. Ekaterinburg ukhetha okungcono, kuhlanganise Izibuyekezo kokushiya ku-intanethi. Lokhu coffee shop - eyodwa nje version eziholayo portal nge Flamp ukubuyekezwa.
ikhofi Good - encane, cafe ethokomele nge ukuklanywa. Inzuzo yayo eyinhloko - ikhofi kanye professional baristas okuhle, nina eningabantu badunyiswa, kanye nokubuyekeza omuhle. Izivakashi athi into ebaluleke kakhulu lapha - ikhwalithi njalo main isiphuzo imenyu - ikhofi.
Ngiqinisile endaweni edume - ke iyona endala coffee shop emzini, futhi inezici eziningana eziphawulekayo, okuyinto abakwazi ukuqhosha nezinye izitolo ikhofi. Ekaterinburg, okokuqala, ingekho enye isikhungo, lapho obungenza ukhetho olukhulu ikhofi kanye milkshakes ngotshwala. inhlanganisela enjalo yekhofi, vodka, utshwala, liqueurs kanye toppings ncamashi kwenye uzame. Okwesibili, akasebenzisi noma iyiphi izindlela ezintsha-fangled yekhofi yokuphisa, ngaphezu kwe-espresso standard, uma ucabanga ukuthi lokhu zingaphezu kokwaneleyo. Awu futhi okwesithathu, ingaphakathi cafe ayikashintshi iminyaka eyishumi, kanti isikhungo neze ukulimaza ukuvumelana.
Le ndawo intandokazi phakathi hipsters kanye nezifundiswa ikhofi emhlabeni ikhofi. Okokuqala woza lapha nakho ezintsha, kanti owokugcina uyoba ngo - novelties emkhakheni we barista futhi yokunambitha fresh amaqembu kanye zekhofi ezokwenza yokusilela Tesla nezinye ikhofi izindlu Ekaterinburg.
Izibuyekezo bathi ungakwazi nambitha nezinhlobonhlobo ezinjalo, ezingalotshwanga ngiyithole kwenye, futhi yenza inombolo ephezulu kakhulu izindlela. Lapha uthande ukudlala flavour, ukudala Latte raspberry, RAF nge Tarragon, Mint noma ukhokho ezisekelwe isiphuzo ikhofi kanye ubhiya Crafting. A azitshelwa imfihlakalo ukulungiselelwa kwazo zonke lokhu ubukhazikhazi, ungathenga nemishini yokuphisa nezinhlobonhlobo ezingavamile ekhaya ucwaningo.
Namuhla, indawo efana - iphuzu empambana abantu ezithakazelisayo kakhulu futhi izindaba, hhayi nje ikhofi. Ekaterinburg liyaziwa House yayo edume of Cinema, futhi esitezi sokuqala manje isebenza kakhulu coffee shop nge Retro ikhofi ethokomele elingaphakathi esihle yokuwugazinga owakho. Ngaphezu umkhathi, eqinisweni, ikhofi Izivakashi kuphawula Ukukhetha ezithakazelisayo izitsha (njenge Pita nge falafel noma Burger vegan) kanye ibhulakufesi kakhulu ekuseni (lokhu welithi "Isidlo sasekuseni evuka" nge ukudla entsha prepackaged nsuku zonke), kodwa futhi balukhulume amakilasi emini khulula acoustic amakhonsathi kusihlwa.
ikhofi Papa Carlo
Ngakho ezihlukahlukene hhayi efana nomunye ikhofi izindlu Ekaterinburg. Uhlu ngokuhle kunakho konke kwawo ngeke ibe ephelele ngaphandle "Papa Carlo".
Lena indawo stylish kakhulu lapho konke ngengozi: netinkomishi koqweqwe lwawo nge logo, futhi ifenisha, izitsha ukukhonza. Baningi ezithakazelisayo futhi imenyu: zekhofi zonyaka kanye iziphuzo yezinkathi ezithile ezifana lemonade, zebhrantshi nemfashini futhi uphudingi. Ukwahlulela ukubuyekezwa, kungcono indawo ngempela emkhathini, lapho okufanele uhambe ngayo.
Kusobala ukuthi namuhla ikhofi - akuyona nje isiphuzo, kanye ifilosofi kanye nenkolo, izithakazelo kanye namakhono, izwe ezithakazelisayo, okuyinto angavulwa kuwo wonke umuntu, kufanele kuphela ukuza esitolo sekhofi.
Indawo yokudlela "Subbotitsa" e Moscow, ikheli, imenyu, ukubuyekezwa
"Ukudoba Russian" e Komarovo: izici kanye nokubuyekeza
Kuyini ekamelweni lokudlela? Igumbi Cafe-yokudlela: izici, amasevisi kanye nokubuyekeza
"Ukucula Tower" (Pushkin) - yokudlela ukuthi ufuna ukubuyela
Indawo yokudlela "Emhlophe Garden" e Marino: imenyu nencazelo amahholo
Kanjani ukuhlela uhambo ekwindla nge nosana?
Vatican City - emnyuziyamu edolobheni noma isimo iminyuziyamu?
Njengoba kophahla olwehlelayo ukusiza ukwandisa endaweni elisophahleni?
Hookah: izesekeli. Diffuser ngoba hookah
Moscow nezikhungo - uhlu. Dental Institute e Moscow
Sonia Gandhi - umfelokazi wangaphambili Indian UNdunankulu Rajiv Gandhi biography